ဗုဒ္ဓဘာသာ | မျိုးမြန်မာ
All posts tagged ဗုဒ္ဓဘာသာ
Posted by myomyanmar on July 8, 2014
Posted in: ဗုဒ္ဓဘာသာ.	Tagged: ဗုဒ္ဓဘာသာ, လူသာ အဓိက, လူသားဝါဒ, Buddha, Humen.	Leaveacomment
ရှင်တော်ဂေါတမဗုဒ္ဓ၏ လူသားဝါဒရှင်တော်ဂေါတမဗုဒ္ဓ၏ ဝါဒအရ လူသားတစ်ယောက်အဖြစ် မွေးဖွားလာဘို့အရေးသည် အလွန်တရာခက်ခဲပြီးလျှင် လူသားဘဝကို ရရှိခြင်းသည်လည်း တန်ဘိုးအရှိဆုံးသော အခွင့်အရေးကို ရရှိခြင်းပင်ဖြစ်၏
အဓိပ္ပါယ်မှာ လူသားအဖြစ်ကိုရခြင်းသည် ခဲယဉ်း၏။ လူသားတို့၏ အသက်ရှည်စွာ နေရခြင်းသည်လည်း ခဲယဉ်း၏။ လူ့ဘဝကို လွယ်လွယ်ရသည်မဟုတ်၊ အလွန်ရခဲ၏၊ အဘယ့်ကြောင့်နည်း လူသားဘဝသည် အလွန်တန်ဘိုးရှိသောကြောင့်ပင်တည်း။
သံယုတ္တနိကာယ် ပါဏသုတ်တွင်လည်း သမုဒ္ဒရာအောက်ခြေတွင် နေထိုင်သော မျက်လုံးတစ်ဖက်ကန်းနေသည့် လိပ်တစ်ကောင်သည် နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကြာမှ ကောင်းကင်ကိုကြည့်ဘို့ရန် အပေါ်သို့တက်လာသည့်အခါ သမုဒ္ဒရာတွင်မျောနေသော ထမ်းပိုးတုံးမှ အပေါက်နှင့်စွပ်မိဘို့ရန် ခက်ခဲသကဲ့သို့၊
လူသားအဖြစ်ကိုလည်း ရရှိဘို့ရန်မှာ အလွန်ပင်ခက်ခဲကြောင်း ရှင်တော်ဂေါတမဗုဒ္ဓ ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။
ထို့ကြောင့်ပင် ရှင်တော်ဂေါတမဗုဒ္ဓသည် ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးစံ၊ နေရာဒေသ၊ နိုင်ငံ၊ အသားအရောင်၊
ယောင်္ကျာ၊းမိန်းမ စသည်ဖြင့် အပေါ်ယံအသွင်သဏ္ဌာန်အားဖြင့် မည်မျှပင် များပြားစွာကွဲပြားခြားနား နေစေကာမူ
လူသားအားလုံးကို တန်းတူရည်တူ တန်ဘိုးထားလျှက် ကရုဏာထား မေတ္တာပွါးရမည်ဖြစ်ကြောင်း
မိခင်တို့သည် မိမိ၏တစ်ဦးတည်းသောသားကို အသက်တမျှ တန်ဘိုးထားစောင့်ရှောက်သကဲ့သို့
လူသားအားလုံးသည်လည်း တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး လေးစားတန်ဘိုးထားကာ သက်ရှိသတ္တဝါ အားလုံးကို
ထို့ပြင် မေတ္တာမပွါးနိုင်ဘဲ ဒေါသအလျောက် သတ်ဖြတ်မိပါကလည်း သတ္တဝါတို့၏ တန်ဘိုးအသီးသီးအလိုက်
အပြစ်ရှိကြောင်း ရှင်တော်ဂေါတမဗုဒ္ဓ သင်ကြားပေးတော်မူခဲသည်။
သတ္တဝါတို့ကို သတ်ဖြတ်မှုကြောင့်ရရှိသောအပြစ်ဒဏ်များတွင် လူကိုသတ်သည့် အပြစ်သည် အကြီးလေးဆုံးဖြစ်ပါသည်။
အထင်ရှား အလွယ်ကူဆုံးသောသာဓက တစ်ခုကိုပြရလျှင် ရဟန်းတစ်ပါးသည် သေစေလိုသောကြံရွယ်ချက်ဖြင့်
လူကိုသတ်မိပါက ရဟန်းအဖြစ်မှလျှောကျလေတော့၏။ ပါရာဇိကကျလေ၏။
အယုတ်ဆုံးအားဖြင့် လူရုပ်အသွင်သဏ္ဌာန်မပီပြင်သေးသော သန္ဓေသားကို ပျက်ကျစေရန်
ရဟန်းတစ်ပါးအနေဖြင့် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မျှ လူကိုသတ်ခွင့်မရှိ၊ သတ်ဘို့ရန် နည်းလမ်းလည်းပေးခွင့်မရှိ။
လူသားတစ်ယောက် သေစေရန်ရည်ရွယ်၍ မည်သို့သော နည်းပရိယာယ်ကိုမျှ အသုံးပြုခွင့်မရှိပေ။
အကယ်၍ လူကိုသေစေရန် တနည်းနည်းဖြင့် ကျူးလွန်မိပါက နောက်ထပ်တစ်ဖန် ရဟန်းဖြစ်ချင်၍
အကြိမ်တစ်ရာ ကမ္မဝါဖတ်၍ ရဟန်းခံသော်လည်း ရဟန်းအဖြစ်ကို မရနိုင်တော့။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။
အလွန်တန်ဘိုးကြီးလှသော လူသားဘဝကို ဆုံးရှုံးအောင် ပြုမူခြင်းကြောင့်ပင်တည်း။
ရှင်တော်ဂေါတမဗုဒ္ဓ၏ဓမ္မသည် လူသားကို ဤမျှအထိတန်ဘိုးထား၏။ လေးစား၏။
ရှင်တော်ဂေါတမဗုဒ္ဓ၏ဓမ္မအရ လူသားသည် တန်ဘိုးအမြင့်ဆုံးဖြစ်၏။ ဂုဏ်သိက္ခာအမြင့်ဆုံးဖြစ်၏။
အားလုံးထက်မြင့်သော လူသားက ကိုးကွယ်ရသော သက်ရှိသတ္တဝါဟူ၍ မရှိချေ။
လူသားသည် သက်ရှိသတ္တဝါအားလုံးကို မေတ္တာတရား ကရုဏာတရား ကိုယ်ကျင့်တရား တာဝန်ဝတ္တရားတို့ဖြင့်
ချီးမြှောက်ရန်သာ တာဝန်ရှိလေသည်။ ။
Posted in: ဗုဒ္ဓဘာသာ, ဘာသာရေး, အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.	Tagged: ဗုဒ္ဓဘာသာ, မတူညီသောအယူဝါဒ.	Leaveacomment
“ခရစ်ယာန်နှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာကမိမ်ိတို့ကို ဖန်ဆင်းထားသောဘုရားကို ကိုးကွယ်ကြတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ မိမိ့လက်နှင့် ဖန်တီးထားသော အရုပ်ကို ကိုးကွယ်ကြတယ်။ (စေတမန်)”
ဗုဒ္ဓ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဗုဒ္ဓဝင်
မြတ်စွာဘုရား၏ တရားတော်( စကားတော်)ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဟု ခေါ်၏
မြတ်စွာဘုရားတရားတော်(စကားတော်)အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံး နေထိုင်သူကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဟုခေါ်၏
မြတ်စွာဘုရား အကြောင်းအရာ မှတ်တမ်းကို ဗုဒ္ဓဝင်ဟုခေါ်၏
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာ အရုပ်ကို ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ ခက်ညံ့ ညံ့ လူတန်းစားမဟုတ်ပါဘူး။
ထာဝရဘုရား(အလ္လာဟ်)ကို ကိုးကွယ်တဲ့ သူတွေကို ခက်ညံ့ညံ့ လူတန်းစာတွေလို့ မပြောချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ပြောမယ်။
The Miracle of Thesism ဆိုတဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုရှိကြောင်း မရှိကြောင်းကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တွေနဲ့ သမိုင်း
ပညာရှင်များ အပြန်အလှန် ဆန်းစစ်ဝေဖန်ထားတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ထာဝရဘုရားဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က Aperson withoutabody (Spirit)
ခန္ဓာကိုယ်မရှိသော ပုဂ္ဂိုလ် လို့ တွေ့ရတယ် တဲ့။ အဲဒါကို Subject Matter အဖြစ်ထားပြီး ဆန်းစစ်တဲ့ သူများအတွက် က (God is
Death) ဘုရားသေပြီလို့ အဖြေရတယ်။ အဲတော့ အလ္လာဟ်ဆိုတာ မရှိဘူး လို့ အဖြေထွက်တယ်။
တကယ်တော့ ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာ မရှိဘူး ။ ဖန်တီးသူ ဆိုတာပဲ ရှိတယ်။
လူတိုင်း ကိုယ်ဘ၀ကို ကိုယ်ဖန်တီးယူရတယ်။ အချိန်တန်ရင် သေကြတာပဲ။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ဖုန်းတွေ ကားတွေ ရုပ်မြင်သံကြားစက်တွေ ။ လျှပ်စစ်တွေ။ တီးထွင်ဖန်တီးယူကြတယ်။
အင်ဂျင်နီယာတွေက တိုက်တွေ၊ တံတားတွေ အိမ်တွေ။ ကားတွေကို ဆောက်လုပ်ပြီး ဖန်တီးယူကြတယ်။အချိန်တန်ရင် အဲဒီစက်ပစ္စည်းတွေလည်း ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးကြတာပဲ။ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာ တည်မြဲတဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူး။ယနေ့ထိနေထိုင်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးတောင် အချိန်တန်ရင်ပျက်ရမှာပဲ။ မေးကြည့်ပါဦးမယ်။ ဘယ်မှာလည်း ဖန်ဆင်ရှင် အလ္လာဟ်ဖန်တီးထားတာ။ ဒီတော့ ထာဝရဘုရားတွေ ထပ် လူတွေက ပိုပြီး မြင့်မြတ်တယ်။ ဗုဒ္ဓက ဒီအတိုင်းဟောခဲ့တာပဲ ။ ကြိုစားရင် ဘုရားတောင် ဖြစ်နိုင်တယ်။ မသိပဲ ရမ်းသမ်းမပြောပါနဲ့ ။ လူအထင်သေးခံရမယ်။မရှိတာကြီးကို ကိုးကွယ်နေမယ့်အစားဘာသာမဲ့လုပ်လိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
ဖန်ဆင်းရှင် ရှိကြောင်း ယုတ္တိ ကျကျ ရှင်ပြနိုင်တဲ့ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဆိုတာ မရှိဘူး။ မိုဟမ္မဒ်တောင် မမြင်ဘူးလိုက်တဲ့ အလ္လာဟ် ကို ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်နေရင် အမှောင်ထဲမှာ မွေးပြီး အမှောင်ထဲမှာပဲ သေဆုံးရလိမ့်မယ်။
ကြိုက်လို့ နောက်တစ်ခေါက်ထပ်တင်တာ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်ပါ။
Posted in: ဗုဒ္ဓဘာသာ, ဘာသာရေး.	Tagged: ဗုဒ္ဓဘာသာ, ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်.	Leaveacomment
အီတလီ ဘုန်းတော်ကြီး ဦးလောကနာထ မှ သာသနာရေးအရာရှိ ဦးဟန်ဋ္ဌေးကို ပြောကြားခဲ့သော စကား……….
“ဒကာကြီး ဦးဟန်ဋ္ဌေး ….မြန်မာပြည်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ ဘုရင့်သားကနေ ဘုရင် ဖြစ်လာတာနဲ့ တူတယ် ။ နိုင်ငံခြားသား ဘာသာခြားကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာတဲ့သူတွေကတော့ ဆင်းရဲသားကနေ ဘုရင်ဖြစ်လာတာနဲ့ တူတယ် ။ ဘုရင့်သားတော်ကနေ ဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါ လွယ်ကူလွန်းတော့ ဘုရင် အဖြစ်ကို သိပ်တန်ဖိုး မထားသလို မြန်မာပြည်သားများဟာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖြစ်ကို လွယ်လွယ်ကူကူရတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကို တန်ဖိုး မထားကြဘူး ။ ဒါကြောင့်လည်း ၀မ်းရေး တစ်ခုလောက်အတွက်နဲ့ဘာသာ ပြောင်းကြတာပေါ့ ။ ဆင်းရဲသားအဖြစ်က ကျားကုတ်ကျားခဲ ကြိုးစားပြီး ဘုရင် ဖြစ်လာတဲ့သူက ဘုရင် အဖြစ်ကို အလွန်တန်ဖိုးထားသလို ကျုပ်တို့ လို ဘာသာခြားဘ၀ကနေ အခက်အခဲ များစွာကို ကျော်လွှားပြီးမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာသူတွေကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အလွန်တန်ဖိုးထားတယ် ။ ဘယ်လောက်အထိ တန်ဖိုးထားသလဲဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကို အသက်ထက် တန်ဖိုးထားတယ် ”
Admin : #MYOKYAWTHU
အီတလီ ဘုန်းတော်ကြီး ဦးလောကနာထ မှ သာသနာရေးအရာရှိ ဦးဟန်ဋ္ဌေးကို ပြောကြားခဲ့သော စကား
အနော်ရထာ မတိုင်မီခေတ် မြန်မာ့သမိုင်းအတွက် ကိုးကားစရာ စာတမ်း